Accueil > Gazetin'ny nosy > Cisco Andramasina: Mpampianatra maherin’ny 70 tsynomena karama
Cisco Andramasina: Mpampianatra maherin’ny 70 tsynomena karama
Velon-taraina ireo mpampianatra mpiasam-panjakana ao amin’ny Cisco Andramasina ankehitriny noho ny karaman’izy ireo mbola tsy naloan’ny fanjakana. Raha ny fanazavana azo tamin’ireto mpampianatra ireto dia ny karama ho an’ny volana janoary no mbola tsy azo hatramin’ny omaly kanefa ny karama ho an’ity volana febroary ity efa voaloa. Maherin’ny 70 ireo mpampianatra voakasika amin’izany, ireto farany izay mpampianatra FRAM teo aloha ary efa voaray mpiasam-panjakana sy nahavita fifanarahana, tamin’ny taona 2015. Efa nanontany ny tompon’andraikitra eo anivon’ny Cisco any an-toerana ireto mpampianatra ireto manoloana izao fahatapahan’ny karama izao ka ny valiny azon’izy ireo dia ny hoe “eo anivon’ny DREN mihintsy no misy olana ka mahatonga ny karama mbola tsy mivoaka.” Etsy ankilan’izay, raha ny fanazavana nomen’ireto mpampianatra ireto ihany, dia misy ny fandrahonana ataon’ireo tompon’andraikitra eo anivon’ny Cisco azy ireo mba tsy hamoaka ny vaovao na hiresaka amin’ny mpanao gazety momba izay tsy fivoahan’ny karama izay. Tsy nanaiky izany anefa ny sasany tamin’ireo mpampianatra ka nanapa-kevitra ny hamoaka ny marina mba ho fantatra ny be sy ny maro, indrindra fa ireo tompon’andraikitra eo anivon’ny ministeran’ny Fanabezam-pirenena. Misy amin’izy ireo mantsy no manahy amin’ny mety ho fanodinkodinana ny vola tokony nandoavana izay karama izay. Marihana fa ny ankamaroan’ireto mpampianatra ireto dia miasa ao amin’ny kaominina Alatsinainy Bakaro avokoa.
Arlette Ramaroson: Efa ofisialy fa kandida ho filoham-pirenena
Manomboka mipoitra tsikelikely avokoa ankehitriny ireo hilatsaka ho fidiana amin’ny fifidianana filoham-pirenena ho tanterahina eto amintsika, any amin’ny faramparan’ny taona. Maherin’ny 10 izy ireo hatreto no efa azo antoka fa ho kandida, saingy tsy mbola nanambara ampahibemaso na tamin’ny fomba ofisialy ny maha kandida azy ny ankamaroan’izy ireo. Omaly dia ny mpitsara iraisam-pirenena Arlette Ramaroson no nanambara tamin’ny fomba ofisialy ho re tany ho ren-danitra fa hirotsaka ho fidiana amin’ny fifidianana filoham-pirenena ny tenany. Raha filohan’ny fikambanana Nosy Malagasy (ANM) no nahafantarana an-dramatoa Arlette Ramaroson teo aloha, dia amin’ny anaran’ny FPRM na ny vondron’ny tia tanindrazana ho an’ny fanarenana an’i Madagasikara no vovonana pôlitika hirotsahany amin’ny fifidianana. Izy raha teo no filoha mpanorina sy mpitarika ity vovonana vaovao ity. Mpitsara teto Madagasikara nandritra ny 25 taona i Arlette Ramaroson, ary tao aorian’izay dia voafidy ho mpitsara iraisam-pirenena tamin’ny alalan’ny latsa-bato nataon’ny solontena avy amina firenena miisa 105 mikambana eo anivon’ny Firenena Mikambana. Niasa nandritra ny 15 taona teo anivon’ny tribonaly iraisam-pirenena momba an’i Rwanda, niasa ihany koa tao amin’ny fitsarana ambonin’ny tribonaly iraisam-pirenena momba ny raharaha Ex-Yougoslavie sy Rwanda tany La Haye. Tamin’ny taona 2016 sy 2017 dia nitarika ny fikambanana ANM (Association Nosy Malagasy) ramatoa Arlette Ramaroson. Fikambanana izay niady mafy ny hiverenan’ireo Nosy Malagasy manodidina na ireo “Iles Eparses” amin’i Madagasikara. Nandritra ny kabary nataony omaly, nilaza ny filohan’ny FPRM fa tafahitsoka ao anatin’ny fahantrana lalina ny Malagasy maro an’isa ankehitriny, potika tanteraka ny fiaraha-monina, mahazo vahana ny kolikoly avo lenta sy ny fanodinkodinana ny volam-panjakana, lasa tantely afa-drakotra ny harem-pirenena tao anatin’ireo fitondrana nifandimby, ka izay no anisan’ny antony lehibe nandrisika azy hilatsaka ho fidiana filoham-pirenena. Ramatoa Arlette Ramaroson izany no vehivavy voalohany nanambara ampahibemaso ny maha kandida azy amin’ny fifidianana. Tamin’io lanonana notanterahina omaly io ihany no nampahafantarin’i Arlette Ramaroson ny fomba eritreretiny hitondrana ny firenena sy ny programan’asany.